Imbasa ePhumelelayo kwiNkosana yaBucala yaseNASHVILLE - I-Airbnb
Imbasa ePhumelelayo kwiNkosana yaBucala yaseNASHVILLE
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguDebra
Yawongwa ngebhaso lokuGcinwa kwezeMbali eNashville, le eclectic kwaye ipholile, indlwana yabucala ilungele ukufika kwakho! Konwabele ukuhlala umgama nje omfutshane kwezinye zezona venkile zibalaseleyo zekofu zaseNashville kunye neendawo zokutyela. Le ndawo yimizuzu ukusuka edolophini, kodwa izolile kwaye ifikeleleka kuyo yonke into! Kulula, indawo yokupaka ngaphandle kwesitalato. Izilwanyana zasekhaya ngokuvunywa kwangaphambili ngentlawulo ye-$35/ngosuku.
Le yindlu yangasese evulekileyo yendawo yokuhlala enesilingi yecathedral, igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye nekhitshi. I-cottage ihonjiswe kakuhle ngemvakalelo yokufudumala kunye nokuzola okuya kwenza ukuba ufune ukuhlala ixeshana! Umgangatho ophakamileyo uneseti yeebhedi ezingamawele ekufikelelwa kuzo ngeleli eqengqelekayo. Le ileli ayisiyonto yokudlala kwaye isetyenziselwa ukufikelela kuphela ekulaleni. Esi saziso sisebenza njengendawo yokuncama engenabungozi ekusetyenzisweni kweleli ukufikelela kwindawo ephezulu. Indawo yokulala ephezulu ifikeleleka ngeleli kwaye ivuleleke kwindawo yokuhlala engezantsi. Le ndawo ayibafanelanga kakuhle abantwana abancinci kwaye nabaphi na abancinci abasebenzisa le ndawo kufuneka babe phantsi kweliso lomntu omdala. Akukho ukudlalela abantwana okanye abantu abadala kwindawo ephezulu okanye kwileli!
35" HDTV ene-I-Roku
4.98 out of 5 stars from 706 reviews
4.98 · Izimvo eziyi-706
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi706
Indawo yethu iyamangalisa !! Sibekwe kumgama ohambahambayo ophumelele ibhaso kwiivenkile zekofu kunye neeresityu. Zintle, iivenkile zamagcisa zinempahla kunye neegalari kuhambo nje lwemizuzu eli-10!
Izimvo eziyi-3 523
I am a wife, mom, and CEO of The Geiger Group. We are 'Living Nashville', offering short and long term real estate in Nashville TN. We create beautiful, creative, and comfortable…
Sinxibelelana neendwendwe kangangoko okanye kuncinci njengoko zithanda.